on April 27, 2016 Related - Critics Hla Kyaw Zaw
ဒီစကားကြားရတော့ ကျွန်မတို့ငယ်ငယ် (၁၉၆၀-၇၀) က ကြားခဲ့ရ ဖတ်ခဲ့ရဘူးတဲ့ နိုင်ငံတကာသတင်းတပုဒ်ကို သွားသတိရလိုက်မိပါတယ်။ အဲဒီကာလများက ပါလက်စတိုင်းလွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦးက အဖွဲ့ဝင်များ လေယာဉ်များကို ပြန်ပေး ခဏခဏဆွဲပြီး အဖမ်းခံ ပါလက်စတိုင်း တော်လှန်ရေးသမားများနဲ့ အလဲအလှယ်လုပ်နေတဲ့ ကာလဖြစ်ပါတယ်။ တခါတော့ လေယာဉ်တစီး ပြန်ပေးဆွဲခံရပါတယ်။ လေယာဉ်ပေါ်ပါ ခရီးသည်များကို ပါလက်စတိုင်းပြောက်ကျားများက ဒူးထောက် ထိုင်ခိုင်းပါတယ်။ ဒီတင် မျက်နှာဖြူအမျိူးသမီးတဦးက "ငါက ဘုရားသခင်ရှေ့ကလွဲလို့ ဘယ်သူ့ရှေ့မှာမှ ဒူးမထောက်နိုင်ဘူး" လို့ ခပ်တင်းတင်း ဆိုလိုက်ပါတယ်။ သူ့ကို သေနတ်နဲ့ချိန်ထားတဲ့ ပါလက်စတိုင်း ပြောက်ကျားမယ်လေး- လိုင်လာခါလက်က " သြော်… မင်းတို့က တချိန်တခါလေး ဒူးထောက်ရတာကို ဒီလောက် ခက်နေရသလား။ တို့လို တသက်လုံး ဒူးထောက်လာခဲ့ရရင် မင်းတို့ ဘယ်လိုခံစားရမလဲ…." လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီခေတ်အဲဒီအခါက--ကမ္ဘာကျော်ခဲ့တဲ့ စကားပါ။ ပြောက်ကျားမယ်လေး --ခါလက်လည်း ကမ္ဘာကျော်ခဲ့ပါတယ်။
အိန္ဒိယပါမောက္ခက သူ့နိုင်ငံက အတွေ့အကြုံကို ထည့်သွင်းပြောသွားတာ မှာ -- သူတို့နိုင်ငံရဲ့ လက်ရှိအစိုးရ (ဝန်ကြီးချုပ် မိုဒီအစိုးရ) ဟာ အလွန်လက်တွေ့ကျစွာ စဉ်းစားတတ်ကြောင်း၊ ကမ္ဘာ့အင်အားကြီး နိုင်ငံများအားလုံးနဲ့ ရင်းနှီးစွာ ဆက်ဆံနိုင်ပြီး ရရှိလာတဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အားလုံးကိုလည်း တိုင်းပြည်အတွက် အကျိုးရှိရင် ရနိုင်သမျှ ရအောင် ယူ တတ်ကြောင်း၊ အင်အားကြီးနိုင်ငံများအကြား အားပြိုင်မှုများအကြား ဘယ်ဘက်မှ မပါဝင်ဘဲ နေတတ်ထိုင်တတ်ဖို့ လို ကြောင်း၊ ကမ္ဘာ့ရေစီးကြောင်းဟာလည်း ပြောင်းလဲသွားပြီဖြစ်လို့ တနိုင်ငံနဲ့ ဆက်ဆံရေးကောင်းအောင် တည် ဆောက်ပြီး တခြားနိုင်ငံကို ရန်လုပ်ဖို့လည်း မလိုတော့ကြောင်း - စတာတွေ ပြောဆိုဆွေးနွေးသွားပါတယ်။ သူက စစ်အေး ခေတ်ကို ရည်ညွှန်းဟန် ရှိပါတယ်။
၂။ ဒုတိယ စိန်ခေါ်ချက်ကတော့ နှစ်ပေါင်း (၆၀) နီးပါး ကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ လူမျိုးစုပဋိပက္ခများ…. တဲ့။ ဗမာပြည်ဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အရှည်ကြာဆုံး ပြည်တွင်းစစ်ကြီး ဖြစ်နေတဲ့ နိုင်ငံတနိုင်ငံ ဖြစ်တယ်။ လူမျိုးစုများသလောက် လူမျိုးစုတိုင်း လက်နက်ကိုင်ပြီး ဗဟိုအစိုးရကို တိုက်နေတာတွေ့ ရတယ်။ ဒီစစ်ပွဲဟာ နှစ်ပေါင်း(၆၀)နီးပါး ရှိနေပြီး ဘယ်ဘက်ကမှ အပြတ် နိုင်ဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဗဟိုအစိုးရကလည်း မိမိတို့ရဲ့အားသာချက်ဖြစ်တဲ့ သမရိုးကျလက်နက်ကြီးများကို လူမျိုးစု များရှိရာ တောင်တန်းဒေသများကို သယ်မလာနိုင်သလို တောင်တန်းဒေသများကနေ တနိုင်တပိုင် တကွဲတပြား တိုက်နေ ကြတဲ့ လူမျိုးစုများကလည်း မြို့ကြီးပြကြီး ဒေသတွေရှိရာ မြေပြန့်လည်း ဆင်းတိုက်နိုင်ကြတာ မဟုတ်ဘူး။ ဒီအတိုင်း ဆက်တိုက်နေကြရင် ဗမာပြည်ကြီးဟာ ကျဆုံးနိုင်ငံ(failed state) ဖြစ်သွားမှာ ဖြစ်ပြီး တခြားနိုင်ငံများကိုလည်း ဆွဲချသွား နိုင်ကြောင်း၊ (ဒီနေရာမှာ တရုတ်ပါမောက္ခက - ဗမာ့တပ်မတော်နှင့် လူမျိုးစုအဖွဲ့များအကြား တိုက်ပွဲများ၊ ကေ- အိုင်- အေ၊ ကိုးကန့်စတဲ့ အဖွဲများနဲ့ ဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲများကနေ သူတို့ တိုင်းပြည်တွင်း ဖိတ်စင်ကျလာတဲ့ ဖြစ်ရပ်များကို ဥပမာပေး ပြောသွားပါတယ်။)
တကယ်တော့ တရုတ်ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်(People’s Liberation Army.P.L.A)ဟာ- တော်လှန်ရေးအတွင်းက ထွက်ပေါ်လာတဲ့ တပ်အဖြစ် တရုတ်ပြည်သူများအကြား အလွန်ဂုဏ်သိက္ခာရှိခဲ့ပါတယ်။ “တပ်နဲ့ပြည်သူ - ရေနဲ့ ငါးပမာ” ဆိုတဲ့ တော်လှန်ရေးအတွင်းက ဆောင်ပုဒ်နဲ့အညီ တော်လှန်ရေး အောင်မြင်ပြီးချိန် တိုင်းပြည် တည်ဆောက်ရေးကာလ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးကာလများမှာလည်း ပြည်သူတွေရဲ့ ဒုက္ခဆင်းရဲဟူသမျှ ရှေ့ကနေ ကာဆီး ခုခံပေးရုံမျှမက ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလည်း (ဥပမာ- ငလျင်ဘေး၊ ရေကြီးရေလျှံဘေး) အသက်ကိုတောင်စွန့်ပြီး ပြည်သူလူထုတွေကို ကယ်တင်ခဲ့တဲ့အတွက် ပြည်သူလူထုရဲ့ သက်ရှိမဟာတံတိုင်းကြီး လို့တောင် တင်စားအခေါ်ခံခဲ့ရပါတယ်။
“ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများက ရသလောက် ခြစားနေပြီး အောက်ခြေစစ်သားများက မလုံတလုံ စခန်းများမှာနေရ မဝတဝစား နေရရင် တိုင်းရေးပြည်ရေး အရေးကြုံလာရင် ဘယ်သူက အသက်ပေး ကာကွယ်တော့မှာလဲ”…. တဲ့။ ဒီအချက်သိပ်မှန် ကြောင်း ၂၀၁၅ က ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ကိုးကန့်ဒေသတိုက်ပွဲများအတွင်း ရှေ့တန်းကဓာတ်ပုံများ သတင်းမီဒီယာများမှာ ပျံ့နှံ့ လာတဲ့အခါမှာ တွေ့လာရပါတယ်။ ရှေ့တန်းစခန်းများမှာ အတုံးအရုန်း ကျဆုံးကြရတဲ့ တပ်မတော်သားများရဲ့ ပုံတွေကို (ပြည်သူတွေရဲ့စာနာမှုကို ရမလား မျှော်လင့်ချက်နဲ့) တင်လိုက်တဲ့အခါ၊ သံခမောက်တွေဆောင်းလျက် ကျည်ကာ အကျီတွေဝတ်လျက်နဲ့ ကျည်ဆန်ထိမှန် သေဆုံးနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့ လူအပေါင်း (တပ်မတော်သားများအပါအဝင်) က အံ့သြတကြီး မေးမြန်းလာကြပါတယ်။ ဘယ်နှယ်ဖြစ်ရတာလဲ။ ဒီလောက်အကာအကွယ်တွေ ဝတ်ထားလျက် က ဘာကြောင့် သေရတာလဲ ... ဆိုတဲ့မေးခွန်းပါ။